Akụkọ - arụrụ arụ ọrụ mkpochapụ Cip4 na-ebi akwụkwọ” bụ usoro nke ụlọ ọrụ mbipụta akwụkwọ n'ọdịnihu.
01 Gịnị bụ ngalaba-ebi akwụkwọ?
O-ebi akwụkwọ, nke a na-akpọkwa ebipụta akwụkwọ, bụ ijikọta otu akwụkwọ, otu ịdị arọ, otu ọnụ ọgụgụ nke agba, na otu mbipụta nke ndị ahịa dị iche iche n'ime nnukwu efere, ma jiri ebe obibi akwụkwọ dị irè nke ọma mee ihe n'ụzọ zuru ezu. The offset press iji mepụta ogbe na ọnụ ọgụgụ obibi akwụkwọ.Uru, ịkekọrịta ọnụ ahịa obibi akwụkwọ ọnụ, irute ebumnuche nke ịchekwa efere na ọnụ ahịa obibi akwụkwọ, bụ ihe mara mma nke mbipụta azụmahịa ugbu a.
Uru nke ngalaba-ebi akwụkwọ bụ ọnụ ala unit dị ala ma nwee ike imepụta ya na obere nha, nke nwere ike izute nzikọrịta nzikọrịta ozi azụmaahịa azụmaahịa yana mkpa ibipụta olu.
Ka ọ dị ugbu a, a na-enwekarị kaadị azụmaahịa, ibe agba, na akwụkwọ mmado maka ihe ejikọtara ọnụ.A na-ekewa akwụkwọ mmado ka ọ bụrụ ihe mmado na-egbutu anwụ na akwụkwọ mmado nkịtị.Kaadị azụmahịa na ibe agba bụ nke ihe ịkpụ ihe ọdịnala, nke anaghị esiri ike ịrụ ọrụ.Maka ngwaahịa na-ejide onwe ya, anyị ga-enyekwa ngwọta dị mma n'ihe gbasara ịkpụ mma na njikwa nrụgide.
Ebe ọ bụ na ngwaahịa nke nsụgharị jikọtara bụ nke ndị ahịa dị iche iche, a ghaghị ịkpụcha ma kewaa ngwaahịa ndị e biri ebi.Maka ụlọ obibi akwụkwọ, iji nyefee printed ihe dị iche iche ahịa n'ime obere oge, ndị ahịa chọrọ a ogbe nke elu-edu ịkpụcha igwe, na mgbe ahụ mechaa igbubi ọrụ ngwa ngwa o kwere omume.
02 Guowang Groupnwere ahụmahụ afọ 25 na mmepụta nke ụlọ ọrụ ịkpụ akwụkwọ.N'ịchọ na njirimara nke ibipụta akwụkwọ, ọ ewepụtala usoro ịkpụ ụlọ CIP4 na-eduga, bụ nke edozila nsogbu nke ndị ahịa na-ebi akwụkwọ na usoro ịkpụ.
Guowang CIP4 ịcha usoro nwere uru doro anya na akụkụ ndị a:
1. Ọnụ ọgụgụ nyocha nke faịlụ JDF dị ngwa ngwa, n'agbanyeghị na ọ bụ faịlụ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ dị mfe, ọ nwere ike ịmepụta usoro ịkpụcha kachasị mma n'ime obere oge;
2. Faịlụ ndị a na-emepụta na-arụ ọrụ nke ọma, na nhazi na ọnụ ọgụgụ nke ịkpụ mma nwere ike nweta nhazi nhazi kachasị mma.
3. Faịlụ a na-emepụta nwere ọrụ nduzi animation iji duzie ọrụ nke ndị ọrụ ịkpụ.Nnukwu mmadụ.